सोमबारको तपाईको राशीफल : कुन राशीको कस्तो समय चल्दैन ? हेर्नुस्:: Artha Dabali
सोमबारको तपाईको राशीफल : कुन राशीको कस्तो समय चल्दैन ? हेर्नुस्
आज वि.सं. २०७६ असार २ गते सोमबार तदनुसार ई.सं. २०१९ जुन १७ तारिख । जेठ शुक्लपक्षको पूर्णिमा तिथी ।
मिश्रित फलदायी समय छ र परोपकार र धार्मिक क्षेत्रका काममा मन जानेछ । सिर्जनात्मक कामबाट आन्मसन्तुष्टि मिल्नेछ । दिन छिप्पिदै जाँदा भाग्यबल बलियो हुनेछ । विद्यार्थीहरुले पढ्न मन गर्नेछन् ।
आजको प्रयासले भविष्यमा भाग्यवृद्धि हुनेछ । बेलुकीदेखि आँटेको काममा देखिएको समस्या हटाएर काम गर्ने समय छ । साना तिना काममा नअल्मलिनु होला । लेनदेनमा संमय रहनुहोला । मेष राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग गाढा पहेलो वा केशरी र शुभ अंक ९ रहेको छ ।
बिहानै मन दोधार हुनेछ । यद्यपि परिवारको सहयोग पाइनेछ । साथीभाइले सहयोग गर्नेछन् । व्यापार व्यवसायमा ठिकै छ तर दिन छिप्पिदै जाँदा खिन्नता र चिडचिडेपना बढ्नेछ । विद्यार्थीहरुको पढाइमा ध्यान जादैन ।
घरायासी समस्या र काममा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । दिन अनुकूल नभए पनि विदेश जाने प्रयास गर्न समय राम्रो छ । बाट लाभ मिल्नेछ । व्यवसायको सन्दर्भमा रमाइलो यात्रा हुनेछ । यस राशी हुनेहरुका लागि आज शुभ रंग नीलो शुभ अंक ८ रहेको छ ।
मावली वा आमाको आशिर्वाद मिल्नेछ । सबै समस्याहरुको समाान हुनेछ । मन आन्दाप्राप्तिका लागि आकर्षित हुनेछ । विलासिताका भावनाहरु जागृत हुनेछ । तर विद्यार्थीहरुल्े भने रमाइलोमा लाग्दा पढाइ विगार्न सक्छन् ।
गृहणीहरुले पारिवारिक सुखका लागि खर्च गर्नेछन् । व्यापार व्यवासायबाट लाभ हुनेछ । प्रेम सम्बन्ध बलियो हुनेछ । यस राशी हुनेहरुका लागि आज शुभ रंहलुका रातोे शुभ अंक ७ रहेको छ ।
बिहानको समय राम्रो छ । व्यापार व्यवसाय राम्रो छ । विद्यार्थीको अध्ययनमा प्रगति हुने दिन छ । विहानको सोचले फाइदा पुर्याउँछ । झैझगडा र विवाद मिलाउन भूमिका खेल्नुपर्ला ।
अपरान्हपछि भने निराशा र वैराग्यका भाव आउनेछ । रिस र क्रोधलाई नियन्त्रण गर्नुहोला शुभ रंग सेतो वा घुर्मैलो र शुभ अंक ६रहेको छ ।
परिवारिक वातावरणमा सुधार आउनेछ । छिमेकी र बन्धुवान्धवले सहयोग गर्नेछन् । प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा होला । विदेशबा लाभ लिन सकिनेछ । सम्बन्ध बलियो हुनेछ । बेलुकीपख दार्शनिक र आध्यात्मिक काममा मन जानेछ ।
विद्यार्थीहरुका लागि ज्ञान वुद्धि र विवेक प्रयोग गर्न सके लाभ प्राप्त हुनेछ । तर बेलुकी पढाइमा बाधा पुग्न सक्छ । सबैका लागि पैसाका मामिलामा भने खासै फरक पर्दैन । सिंह राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग आकाशे र शुभ अंक ९ रहेको छ ।
याात्राको सम्भावना छ । विहान सामाजिक र परोपकारका क्षेत्रमा लाग्दा आनन्दको अनुभूति हुनेछ । दिउँसोबाट पारिवारिक र घरायासी प्रयोजनमा समय दिइनेछ । खर्च बढे पनि घरायासी सुख सुविधाका सामग्रीको जोहो हुनेछ ।
व्यापार व्यवसायमा लाभ हुनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार हुनेछ । बेलुकी भने घरायासी समस्या देखिन सक्छ । मन विथोलिन सक्छ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग कलेजी र शुभ अंक ४ रहेको छ ।
मेवा मिष्ठान्न खान पाइने समय छ। सामाजिक कामको दायित्व बढ्नेछ । वित्तिय क्षेत्र र व्यापारिक लगानीका लागि नयाँ काम गर्न अनुकूल समय । कृषि, वन र माटोसम्बन्सधी व्यवसायीले लाभ प्राप्त गर्नेछन् ।
प्रशस्त धन आर्जन गर्ने अवसर पाइनेछ । भाइबहीनी र सन्ततीले खुशीको समाचार सुनाउलान । सहकार्यको माध्यमबाट विद्यार्थीहरुले प्रगति गर्न सक्नेछन् । मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादा बढ्नेछ । विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग र सल्लाहले महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुनेछ । परोपकार र दानुपुण्यका क्षेत्रमा मन जानेछ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग हरियो र शुभ अंक ३ रहेको छ ।
कुरा काट्नेहरु चुप लाग्नेछन् । पारिवारिक सहयोग बढ्ने समय छ । स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हला । कुनै भौतिक साधन किन्न बेलुकीको समय उचित छ । नयाँ ठाउँको यात्रा हुनसक्छ । अपरान्हपछि आर्थिक पक्षमा उल्लेखनीय लाभ हुनेछ ।
डुब्न लागेको धन फिर्ता हुन्छ । रोकिएका काम बन्ने समय छ । विद्यार्थीहरुको मनमा रोजगारीको प्रयास गर्न वा कमाउने सोचको विकास हुन्छ । लामो समयदेखि रोकिएको काम बन्नेछ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग सेतो र शुभ अंक २ रहेको छ ।
मन खिन्न भए पनि अपरान्हपछि मन भुलाउने उपायको खोजी हुनेछ । शत्रु परास्त हुनेछन् । इष्टमित्रकोले प्रशंसा गर्नेछन् । परोपकारका काममा मन जानेछ । आफ्नो निर्णयमा गरिएको काममा बेफाइदा हुनेछैन । व्यापार व्यवसायमा फाइदा छ ।
मनमा देखिएका निराशा समाप्त हुनेछ । नयाँ व्यापार वा व्यवसायतर्फ मन आकर्षित हुनेछ । सोचेअनुसार काम नबने पनि अत्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ । विद्यार्थीहरुले पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्ने समय छ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग गुलाबी र शुभ अंक १ रहेको छ ।
आज विद्यार्थीहरुले प्राज्ञिक क्षेत्रमा लाभ प्राप्त गर्नेछन् । पशुपालन र कृषि व्यवसाय गर्नेहरुले धन लाभ गर्नेछन् । प्रायः सबैले तर्क, वहस र वादविवादमा विजय प्राप्त गर्नेछन् । धार्मिक गतिविधिमा लाग्न र चिन्तनमूकल काममा मन जानेछ ।
सरकारी वा प्रशसासनिक काम बन्नेछ । अपरान्हपछि भने पेसा वा व्यवासयमा ध्यान केन्द्रित हुँदैन र खर्च गर्न मन हौसिनेछ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग बैजनी वा पहेलो र शुभ अंक ४ रहेको छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको लागि दिन राम्रो छ । साथीभाइ र इष्टमित्र सबैले सहयोग गर्नेकछन् । विद्यार्थीहरुले मेहनतअनुसार फाइदा लिन सक्नेछन् । दिउसोबाट सामाजिक वा प्रशासनिक गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्नेछ ।
उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसायमा फाइदा हुनेछ । प्रतिस्पर्धीहरु परास्त हुनेछन् । सामाजिक र राज्यपक्षबाट प्रशंसा र सम्मान र सहयोग प्राप्त हुनेछ । यस राशी हुनेहरुका लागि आज शुभ रंग नीलो र शुभ अंक ३ रहेको छ ।
व्यापार व्यवासयमा समय राम्रो छ । लगानीबाट फाइदा नै छ । दिन ढल्दै जाँदा कर्मप्रति समर्पित भइ खट्ने अनुकूलता मिल्नेछ । आज व्यापार व्यवसाय र काममा सधैँभन्दा धेरै मिहेनत गर्नुपर्ला ।
प्रेम सम्बन्ध वा परिवारका लागि समय निकाल्न नसक्दा तित्तता आउन सक्छ । कर्मक्षेत्रमा चाप बढ्नाले रतिराग तथा पारिवारिक सम्बन्धप्रतिको आकर्षणमा कमी देखिनेछ । तर घरायसी वातावरण धमिलिने स्थिती भने देखिदैन । खटेजति सफलता पाइनेछ । यस राशी हुनेहरुको लागि आज शुभ रंग कालो र शुभ अंक २ रहेको छ ।